Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno jir ah waxaana jeclahay in aan maalin noqdo hooyo. Laakiin qoyskaygu midaasi ma doonayaan. Waxaa igu adag in aan wax cusub barto. Sidaas darteeda waa in aanan hooyo noqonin. Waxaan u malaynaa midaasi in ay tahay mid aanan cadaalad ahayn. Miyay tahay in aanan noqonin hooyo marka aan weynaado? – Tips for refugees
Previous Previous post: https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/
Next Next post: Xusuusin muhiim ah: Ma jiri doonaan qoraalo kale oo cusub